Best Manager iPhone File for Windows & Mac
> Resource > iPhone > Best iPhone File Manager in Maamul files iPhone
Lugood waa tababaraha iPhone file in dadka isticmaala iPhone laga yaabaa in maalin walba isticmaasho. Waxaa weyn u shaqeeya dadka isticmaala helaan in Lugood Store in ay iibsadaan files oo u hagaagsan in iPhone. Si kastaba ha ahaatee, ma caawin kara dadka isticmaala maamuli files iPhone aragga, ama aynu ka nidhaahno, si toos ah iPhone. Tani waa meesha ay ku dhacdo gaaban. Haddii aad u baahan tahay tababare file dhamaystiran u iPhone si ay u maareeyaan files on iPhone si fudud oo waxtar leh, waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan TunesGo Wondershare. Waxaa falaa Lugood kartaan iyo waxa Lugood ma sheegi karo.
IPhone Isku day file maxkamad Tababaraha version hadda!
Fiiro gaar ah: Labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. Dooro mid ka mid sax ah si aad u computer.
Tababare File Best u iPhone falaa Lugood ma sheegi karo!
Wondershare TunesGo waa tababaraha ugu fiican file iPhone. Waxaa falaa Lugood lama helo!
Tayeeyo Lugood Library la music ka iPhone in click hal. Akhri faahfaahinta sida ay u gudbiyaan music iPhone in Lugood Library;
Dib ugu heeso soo xulay, videos, iyo playlists on iPhone in Lugood Library; [Kaliya laga heli karaa Wondershare TunesGo (Windows)]
Music dhoofinta iPhone, videos, iyo sawiro in computer;
Beddelaan iPhone leheyn videos iyo music inay iPhone qaabab saaxiibtinimo inta ay socoto wareejinta;
Dhoofinta Xiriirada iyo SMS ka iPhone in computer ; [Kaliya laga heli karaa Wondershare TunesGo (Windows)]
Dhoofinta Xiriirada ka iPhone in file vCard, Outlook, buug Cinwaanka Windows, iyo Windows Live Mail, [oo kaliya laga heli karaa Wondershare TunesGo (Windows)]
Samee playlists oo albums sawir si iPhone si toos ah uga kombiyuutarka;
Delete music, videos, playlist, sawiro, iyo sawirada ka iPhone;
Kuwan sifooyinka kor ku xusan, waxaad ka iPhone wareejin karo files si Lugood Library ama computer si fudud u gurmad. Astaamahani waa qaar aad u faa'iido badan marka aad u baddashaan computer cusub ama lumiso files ee Lugood Library.
Best File Manager iPhone falaa Lugood karto!
TunesGo Wondershare sidoo kale wuxuu Falaa Lugood kartaan. Sidaa daraadeed, si aad u iPhone wareejin karaan faylasha ka computer sidoo kale.
Bedelka music, videos, iyo sawiro ka computer si iPhone;
Nidaameed Muuqaalka iyo xiriirada Windows si iPhone;
In kastoo Wondershare TunesGo falaa, waa Lugood aan karin iyo Saaxiibkiis Lugood. Hadda waxa aan u sheegi kartaa in aad buugaag ka computer wareejiyo iPhone oo Lugood kartaa. Iyadoo iPhone File this Manager App iyo Lugood, waxa aad helaysaa waayo-aragnimo fiican adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone.
Isku day TunesGo Wondershare - iPhone File tababaraha ugu fiican
Fiiro gaar ah: Sida aan kor ku soo sheegnay, version Mac ma u dhigantaa version Windows ah. Hadda Wondershare TunesGo (Mac) oo kaliya taageeraa music, videos, iyo sawiro. Hadda horumarinta ku hawlan yihiin sidii ay u hagaajin, rajeynaya version soo socda uu noqon doono awood badan.
Daawo Video inaad aragto waxa Manager iPhone File ka qaban kartaa sidii aad u